Kungani ingane ilwa, ibetha izilwane
Ake sikhulume ukuthi kungani ingane ilwa, ibetha izilwane? Konke lokhu, ngokuqinisekile, kusekelwe kuphela ekuhlaziyweni kwengqondo yengane, ngakho-ke, ngencazelo yayo, kufanelekile ukuqala.
Umntwana ukhula nsuku zonke futhi nsuku zonke ufuna ngokugcwele ukuthi aqale ukuthonya kanjani umhlaba.
Lapha wabeka ibhakede lesanti ngaphesheya kwebhodi, futhi lalingaphezu kwalo. Waphonsa itshe ebhodleleni, lawa yizicucu. Konke lokhu kuthinta imvelo. Ingane ifuna ukubona ukuthi ingathonya umhlaba, ngakho wenza konke. Kodwa lokhu akusiyo yonke into ephilayo, ngakho-ke isuke isithukuthele ngokushesha, bese ifuna ukuqala ukuthonya hhayi nje amatshe egcekeni, kodwa iqala ukuthonya iziphilayo eziphilayo, eziphilayo. Cha, akekho amandla okoma ukuphosa. Njengomthetho, konke lokhu kwenzeka ezingeni elingenakuqaphela futhi akuhambisani nemibono yokubusa kwendawo yonke. Kodwa, kunjalo kunjalo.
Ngakho-ke, lokhu kuholela ingane ukuthi iqala ukuthinta ezungezile ngokomzimba. Okusho ukuthi ingane ilwa nokushaya izilwane.
Kungani ingane ilwa? Uma ngokwemvelo unesibindi futhi engazifihli ngemuva komama wakhe, ngakho-ke, njengoba nje umthetho, abantu abanjalo baqala ukulwa. Bafuna ukuqala ukuzwa uhlobo oluthile lwethonya, futhi kuye ngokuthi uhlobo, kunezinhlobo ezimbili zethonya. Abanye bazama ukwenza okuhle, ukwabelana, usizo. Abanye baqala ukulwa. Ekuqaleni bacela okuthile ngezwi elihlelekile, bese kuthi uma bengalaleli, baqala ukumshaya. Uma umntwana enamandla kunalowo oshayayo (futhi, njengombuso, isandla asivukeli oqinile, ngoba ukusibeka komzimba kunomthelela omkhulu emqondweni), ukuze acimise ukoma kwakhe wethonya emhlabeni. Futhi uma ababuthakathaka bengaboni, ke baqala ukushintshela kulabo abangenasici ngokuphelele. Okusho ukuthi, ezilwaneni. Baqala ukushaya izilwane, ukugoqa imisila yabo, ukuguqula imilenze yabo, ngezinye izikhathi ngisho nokuzikhukhumeza ngokweqile. Konke lokhu kubonakaliswa kweqiniso lokuthi unethonya kulo mhlaba, noma ngabe uhlobo lwenja. Ngakho-ke, singaphetha ngokuthi kunezinto ezimbili eziqine kakhulu, futhi lapho ingane ihamba khona ngokweqile, umuntu angaqonda ukuthi ukhuliswa kangakanani. Uma isimo sokuqonda okuhle nokuzwana kulawulwa endlini, ngakho-ke, njengomthetho, ingane izoba nokuthula nokulinganisela, futhi kungakhathaliseki ukuthi sicabanga ukuthi ingane encane futhi ayiqondi lutho, okufanayo, ngisho noma engayiqondi lutho, uyayithatha indlela ukuziphatha njengeponji.
Esinye sezizathu zokuthi kungani izingane ziqala ukulwa futhi zishaya ukungazi kwabo ezenzweni zabo. Ekuqaleni bayashaya wonke umuntu ngenxa yokuzama, ngakho-ke, hlola impendulo. Uma wonke umuntu ephendula ngendlela efanayo, okungukuthi, ukunganeliseki, khona-ke izikhathi eziningana ukuthi umntwana ufunde ukuthi akufanelekile ukwenza kanjalo. Uma impendulo ihluke njalo, khona-ke ukuhlolwa kuzophindaphindiwe ngezikhathi ezithile, futhi iziphetho ngeke zenziwe.
Kufanelekile ukuphawula ukuthi ngezinye izikhathi ingane ilwa, hhayi ekuhlaseleni, kodwa ngokuphambene nokuzivikela. Ukulwa kuhlukile, uma evikela, avikela abanye njalo njalo. Ngakho konke kulungile, futhi uyakwazi ukuzimela, kodwa, noma kunjalo, uma exazulula le nkinga kaningi, kubalulekile ukucabanga nokuchaza ingane ukuthi ukulwa kuyindlela enamandla kakhulu futhi kufanele kugwenywe. Ngakho, singathola iziphetho ezinjalo.
Isizathu sokuqala sokuthi ingane ihlukumeze ukuthi kukhona uhlobo oluthile lokuhlukunyezwa ekhaya lomntwana. Okwesibili, kunjalo, uhlobo lomntwana, ngoba lubonakala kusukela eminyakeni yokuqala. Futhi owesithathu, engaziqondi ngokugcwele lokho okushiwo ukuhlaselwa nokuhlaselwa okunjalo, okuyinto ekugcineni kuholela ekuziphatheni okungenasisindo.
Manje ukuthi uqonde lokho okusemqoka, ungangena ebhizinisini. Eqinisweni, indlela yokubhekana nayo, uma sekuqalile kakade.
Njengoba sesishilo kakade, konke kuxhomeke kubazali, ngakho-ke udinga ukucabangela konke ngokuningiliziwe: zonke izindlela, izimo nokuziphatha kwabazali uma kwenzeka ukuthi inkinga ikhona.
Ukulwa kuhlukile futhi ngakho-ke into yokuqala okudingeka ukwazi, ngabe yiluphi uhlobo lokulwa. Uma ngabe ingane yakho iyisisulu, khona-ke lokhu kuyisikhathi sokuhlanganyela ekukhuliseni kwakhe ngalokhu, uma kuvikelwe ngamaphiko, futhi kuyisizathu, kodwa kulokhu konke akukubi kakhulu.
Into yokuqala okufanele uyenze ukukhuluma nofakazi bampi. Futhi kudingeka wenze lokhu ngaphandle kokuba khona kwengane, khona-ke uzokutshela kamuva ukuthi konke kwakunjani ngokwendlela yakhe, futhi le nguqulo ingase ihluke endleleni abantu abadala abakubona ngayo isimo. Uma ekwazi ukutshela ngokucacile ukuthi kungani le mpi iqalile, khona-ke kungenzeka ukuthi ulungile. Uma iyanqabela futhi ingathuli, kusho ukuthi iyaqonda ukuthi ayilungile, noma ayinikezi ukulwa, amanani.
Uma kwenzeka ukuthi ukulwa kungavamile, abazali kufanele bangakhathazeki, kodwa uma lokhu kungumkhuba, izinyathelo ezinkulu zidingekile. Uma ingane yakho ibona wonke umuntu njengezitha, kufanele siqale ukufuna izimfanelo ezinhle kontanga zethu. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuthumela ingane esikhwameni sezemidlalo, lapho ezovumela khona ukuthukuthela, isibonelo, esikhwameni sokubhoboza.
Uma ukulwa kudlulile ngaphambi kwamehlo akho, khona-ke ukuphendula kwakho kufanele kube okucabangelayo ngangokunokwenzeka. Kufanelekile ukuvikela ingane yakho ngemuva kokuhlolwa, okulungile, nokuthi ubani omele. Ngoba uma nje uqala ukuvikela, ingane ingase icabange ukuthi iyingqayizivele futhi ingenza noma yini ayifunayo. Kodwa akudingeki umjezise ngokushesha, ngoba khona-ke angakwazi ukuvaliwe kubazali bakhe futhi uzokulwa, alinde umzuzu omuhle - uma abazali bengekho.
Ngakho-ke, into ebaluleke kunazo zonke kubazali akufanele ihlangane nesimo kuze kube yilapho ikhule ibe yinto engaphezulu kodwa ingasongeli impilo yezingane.
Izinto ezinobungozi ezifana nezinduku namatshe kufanele zisuswe kumntwana. Futhi kungcono ukuxoxa ngezenzo endlini. Futhi kungcono ukummema ukuba axolise kulowo angamcasuli kahle. Uma engakalungi ngempela, kodwa engahlose ukuxolisa, khona-ke umkhosi uphela lapha.
Umbuzo wokuthi kungani ingane ilwa nokushaya izilwane ilula futhi iyaqondakala, kodwa kufanele iphathwe ngayo yonke ukunakekelwa.
Imidlalo ekugezeni izingane kusukela eminyakeni eyodwa kuya kwemibili
Uthando lwezingane eminyakeni yobudala kanye nezenzo zakho
Indlela yokuthuthukiswa yokuqala yakwaGlen Doman kusuka eminyakeni engu-0 kuya kweyengu-4 ubudala
Ukuthuthukiswa kwengqondo kwezingane ezingaphansi konyaka owodwa ubudala
Izinhlobo zemfundo emndenini
Ukukhwabanisa uCristiano Ronaldo: Gay ngempela noma ihlaya?
Isobho se-pear Vegetarian
Indlela yokusebenzisa amafutha we-flaxseed
Indlela yokubopha isikhala som neck
Imikhiqizo yezinhlobonhlobo zokunakekelwa kwehlobo
Isikhathi sobudala, izinkinga eziyinhloko
Shanyisa ngendlela yayo: amaconsi-ama-portholes Cover FX Amanothi e-Enhancer Amandla
Ikhekhe lekhekheji le-classic I-Grafskie imincintiswano nge-meringue ngesithombe
Izakhiwo eziwusizo kanye nesicelo se-thyme namafutha alo abalulekile
Indlela yokukhetha izindandatho zomshado ezifanele
Amagama afisa umuntu othandekayo